Wararka Maanta: Arbaco, Sept 30, 2020-Puntland oo ka digtay roobab dabeyla wata oo kusoo fool leh deegaanadeeda
Wararka Maanta- Arbaco, Sept 30, 2020
Arbaco, September 30, 2020 (HOL) - Warkaan digniinta ah ayaa waxaa soo saaray wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbedalka cimilada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, waxaana lagu sheegay in roobab mahiigaan ah oo wata dabeylo xooggan oo kusoo wajahanyahay deegaanno badan oo kamid ah maamulkaas.
“Roobab mahiigaan ah ayaa la saadaalinayaa inay kusoo wajahan yihiin degaannada puntland, qeybo kamid ah gobolada Bari, Nugaal ,Sool iyo Sanaag ayaa la rajeynayaa inay heli doonaan rooob xoogan oo sababi kara daadad ” ayaa lagu yiri warka degniinta ah ee Puntland ay sii deysay.
Galmudug oo kiis cusub oo Coronavirus ah laga helay
9/30/2020 6:30 AM EST
Arbaco, September 30, 2020 (HOL) - Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Galmudug ayaa waxay maanta shaacisay in deegaannada maamulkaas lagu arkay mar kale xanuunka Covid19, kadib markii baaritaan ay ku sameeyeen saraakiisha caafimaadka bukaan qabay xanuunka.
Maamulka Hirshabeelle oo madaxda beesha caalamka ku matala Soomaaliya ka codsaday in doorashada laga taageero
9/30/2020 6:23 AM EST
Arbaco, September 30, 2020 (HOL) - Madaxda maamul Goboleedka Hirshabeelle ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan iney beesha caalamka ay taageero weyn uga helaan xilli dhowaan maamulkaas uu galayo doorashada madaxda sare iyo soo xulista xubnaha Baarlamanka labaad.
Dab khasaare geystay oo ka kacay magaalada Dhuusamareeb
9/30/2020 4:43 AM EST
Arbaco, September 30, 2020 (HOL) - Dab qasaaro geystay ayaa saaka ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Biden uses 'inshallah' in response to Trump during debate, lighting up Twitter -CNN
9/30/2020 2:41 PM EST
Baidoa based 8th Brigade Officers complete ‘groundbreaking’ UK army conducted training -HOL
9/30/2020 9:21 AM EST
President Farmaajo condoles with Kuwait on death of leader -HOL
9/30/2020 4:48 AM EST
Reopening schools in NEP daunting task -The Star
9/30/2020 4:40 AM EST
Minneapolis Police Open Probe Into Reports Ilhan Omar's Allies Harvested Piles of Ballots for Money -Sputnik News
9/30/2020 4:36 AM EST
'You're the worst president America has ever had': Donald Trump and Joe Biden clash in chaotic debate -Reuters
9/30/2020 12:32 AM EST
Leaders accuse DP Ruto of using miraa row to sabotage Uhuru -Nation
9/30/2020 12:22 AM EST
Somali Bantu Food Truck Coming to Belfast -Free Press Online
9/30/2020 12:19 AM EST
Concern over spike in FGM after 110 girls cut in Wajir -The Star
9/30/2020 12:17 AM EST
Government officials raise the red flag and warn that culprits will be arrested and prosecuted.